laacibfm.com » Ernesto Valverde Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadlay Shaqadii Ay Barcelona Ka Eriday, Shaqsiyaad Uu Magacaabay Iyo Dardaaran Uu U Jeediyey Macallinka Cusub
Tababarihii ay xalay Barcelona shaqada ka caydhisay ee Ernesto Valverde ayaa soo saaray bayaan uu kaga hadlay waayihiisii labada sannadood iyo badhka ahaa ee uu soo laylinayey kooxda laga eryey, caqabadihii uu la kulmay iyo guulihii uu gaadhay.
Ernesto Valverde waxa uu sheegay in marxalado isku milan oo farxad iyo murugo leh uu ku qaatay Barcelona muddadii uu macallinka u ahaa, waxaanu dardaaran u jeediyey tababaraha beddelay ee Quique Setién.
War-saxaafadeed uu soo saaray Valverde oo lagu daabacay website-ka Barcelona ayaa waxa uu ku yidhi:
“Waxa soo dhamaaday waqtigaygii tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona. Waxay ahaayeen laba sannadood iyo badh bilowgii hore aad u adkaa. Waqtigaa waxaan lasoo qaatay xilliyo farxad badan oo aan u dabbaal-degay guulo iyo koobab, laakiin waxa kale oo jiray xilliyo kakan oo adkaa. Si kastaba, waxa aan doonayaa in marka hore aan calaamadiyo khibraddayda taageereyaasha iyo jacaylkii ay ii muujiyeen waqtigii aan tababaraha u ahaa.
“Waxa aan u mahadcelinayaa Madaxweyne Josep Maria Bartomeu iyo guddida maamulka ee fursadda iisiiyey inaan tababaro kooxda koowaad iyo kalsoonidii ay igu qabeen dhamaan waqtigii aan joogay.
“Waxa kale oo aan doonayaa inaan u mahadceliyo dhamaan dadkii aanu ka wada shaqaynay kooxda ee taageerada ila garab taagnaa iyo sidii ay iila dhaqmeen muddada labada sannadood iyo badhka ah, gaar ahaan kuwii shaqaynayey iyo kuwii ku xeersanaa ee aanu waqtiyada badan ku wadaagnay Ciutat Esportiva iyo kulamada aanu safarka ahaynba.
“Dabcan, waxa aan jecelahay inaan ciyaartoyga uga mahadceliyo dhamaan dedaalkoodii noo horseeday inaanu ku guuleysano afar koob. Laga bilaabo maanta, waxa aan u rajaynayaa nasiib wanaagsan oo dunida guudkeeda ah iyo sidoo kale tababaraha cusub Quique Setien.”
Tababare Ernesto Valverde waxa labadii sannadood iyo badkii uu tababaraha ahaa uu Barcelona kula guuleystay laba koob oo LaLiga ah iyo hal Copa del Rey ah, laakiin waxa uu niyad-jab kala kulmay Champions League oo labadii sannadoodba ay kasoo reebeen AS Roma iyo Liverpool oo goolal tiro badan usoo dhiibay.
Valverde oo u dhashay waddanka Spain, waxa uu xalay noqday macallinkii ugu horreeyey ee ay kooxdu cayydhiso tan iyo sannadkii 2003, markaas oo Louis van Gaal sidan oo kale oo eryey.